वौद्ध दर्शन र स्प्रीङ, समर, फल, वीन्टर… एण्ड स्प्रीङ - Milan Limbu - Journalist
मिलन लिम्बू शनिबार, २७ बैशाख, २०७७, साँझको ०७:४५ बजे
आध्यात्मिक जीवनमा मोहयुक्त आधुनिक दुनियाँले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
आध्यात्मिक बुझाइमा माया, प्रेम, यौन, घृणा, लोभ के हो ?
हामीले कल्पना गरे जस्तो आध्यात्मिक जीवन साच्चीकै आनन्दित छ ?
मोहको दुनियाँ त्यागेर आध्यात्मिक दुनियाँमा बाच्न कति सहज ?
आध्यात्मिक दुनियाँबाट मोहयुक्त आधुनिक दुनियाँमा फर्कन सम्भव छ ?
यी प्रश्नहरुको जवाफः ‘स्प्रीङ, समर, फल, वीन्टर… एण्ड स्प्रीङ’
आध्यात्मिक र आधुनिक जीवन बिल्कूलै फरक
दक्षिण कोरियाली निर्देशक किम कि–दुकद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘स्प्रीङ, समर, फल, वीन्टर… एण्ड स्प्रीङ’ सन् २००३ मा रिलिज भयो । चलचित्रले आध्यात्मिक र मोहयुक्त आधुनिक जीवनबारे मिहिन रूपमा ब्याख्या गरेको छ । भारतीय मूलका फ्रान्सेली निर्देशक पन नलिनले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘समसरा’ र ‘स्प्रीङ, समर, फल, वीन्टर…एण्ड स्प्रीङ’ दुवैको निष्कर्ष आध्यात्मिक जीवन सहज छैन भन्ने हो । आध्यात्मिक जीवनमा पनि आधुनिक दुनियाँको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा रहन सक्छ । ती प्रभावसँग कठोरताका साथ मुकाबिला गर्न नसक्दा आध्यात्मिक जीवन दुर्घटनामा फस्छ । यी दुवै चलचित्रले मोहयुक्त आधुनिक दुनियाँ त्यागेर आध्यात्मिक जीवन रोज्नेहरुको दुनियाँबारे खासै बोलेका छैनन् । तर, ‘स्प्रीङ, समर, फल, वीन्टर…एण्ड स्प्रीङ’ मा एउटा प्लट छ, जुन प्लटले केही बोल्छ ।
एक जना युवती बिरामी छे । भौतिक सुविधायुक्त आधुनिक दुनियाँकी उनी उपचार गर्न सुविधा सम्पन्न अस्पताल छोडेर एक बौद्ध भिक्षुसम्म पुग्छिन् । एकान्त ठाउँ, मनोरम ताल । मध्यभागमा एउटा सानो बौद्ध विहार । जहाँ, ती युवतीको आध्यात्मिक र प्राकृतिक पद्धतिबाट उपचार हुन्छ । प्रकृति, शान्त र मनमोहक वातवरण, आध्यात्मिक जीवनशैली पनि युवती सन्चो हुनुका कारण हुन् । ‘स्प्रीङ, समर, फल, वीन्टर…एण्ड स्प्रीङ’ ले यो प्लटमार्फत आधुनिक जीवनशैली त्यागेर आध्यात्मिक दुनियाँ रोज्नेबारे बोलेको छ । तर, पुग्दो छैन ।
बौद्ध दर्शन, प्राणी जगत र प्रायश्चित
एकान्त ठाउँ, मनोरम ताल । मध्यभागमा एउटा सानो बौद्ध विहार । जहाँ एक वृद्ध र युवा भिक्षु छन् । युवा भिक्षु सानैमा अनुहार छोपेर आएका आमाले विहारमा छोडेर भागेका हुन्छ । मध्य चिसोयाम, हिमपातका कारण ताल पूरै जमेको छ । वृद्ध भिक्षुले पानीका लागि जमेको ताल काटेर प्वाल बनाएका हुन्छन् । छोरालाई गुम्बामा छोडेर भाग्ने क्रममा ती आमा, भिक्षुले काटेर बनाएको प्वालबाट डुबेर प्राण त्याग्छन् । छोरो बिस्तारै हुर्कन्छ । भिक्षु बालक खेल्ने क्रममा खोलाका माछा, भ्यागुता र सर्पलाई ढंङ्गा बोकाएर यथास्थानमा छोड्छन् । यी सबै गतिविधि नियालिरहेका वृद्ध भिक्षुले सजाय स्वरूप बालक भिक्षुलाई सुतेका बेला ढुङ्गाको भारी बाँधिदिन्छन् । र, हिजो भारी बोकाएर छोडेका माछा, भ्यागुता र सर्प खोज्न पठाउँछन् । माछा र सर्प मरेका हुन्छन् । यो प्लटले प्राणी जगतबारे बौद्ध दर्शनको ब्याख्या गर्दछ ।
पीडायुक्त भौतिक शुखमय जिन्दगी !
युवती उपचार गर्न आएको समय सानो भिक्षु पनि युवा अवस्थाका हुन्छन् । केही दिनमै ती युवती र युवा भिक्षुबीच प्रेम सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । उनहिरु उन्मत्त यौनान्दमा रमाउँछन् । एक दिन डुङ्गामै यौन संसर्गपछि निदाएका युवती र युवा भिक्षुलाई वृद्ध भिक्षुले देख्छन् । र, वृद्ध भिक्षुले युवतीलाई घर फर्काइदिन्छन् । युवतीसँग प्रेममा रहेका युवा भिक्षु पनि विहार छोडेर युवती भएको ठाउँमा पुग्छन् । वैवाहिक जीवनको कुनै घटनाक्रममा युवा भिक्षुले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गर्न पुग्छन् र विहार फर्कन्छन् । जहाँ वृद्ध भिक्षुले युवा भिक्षुलाई दिएको सजाय र युवा भिक्षुले गरेको प्रायश्चितले बौद्ध दर्शनले व्याख्या गर्नेे प्रायाश्चितबारे बुझाउँछ ।
आध्यात्मिक जीवन र आत्मदाह
मोहयुक्त आधुनिक जिनवमा भोगेको पीडाले छट्पटाइरहेका युवा भिक्षु त्यसबाट छुटकारा पाउन आत्मदाह गर्ने प्रयास गर्नछन् तर सक्दैनन् । त्यही समय वृद्ध भिक्षु भन्छन् –अरुलाई मार्न सजिलो छ । तर, आफैलाई मार्न कठिन । हत्या अभियोगमा युवा भिक्षु जेल जान्छन्, वृद्ध भिक्षु सहजै आत्मदाह गर्छन् । यहाँ भन्न खोजिएको छः आफ्नो चाह अनुसार देहत्यागका लागि पनि माया–प्रेम, लोभ, घृणा सबै त्यागेर आध्यात्मिक जीवनको एउटा चरमविन्दु परा गर्नुपर्छ !
दर्शन र प्रयोग दुवै कारण गज्जब
चलचित्र, तालको बीचमा रहेको सानो विहार र तालको किनार ओहोर–दोहोर गर्दै सकिन्छ । चलचित्रका अधिकांस दृश्यः ताल–किनार ताल–किनार मात्रै ! कलाकार थोरै छन् तर प्रस्तुती सबैको अब्बल छ । मूलभूत रूपमा दुई भिक्षुको कथा मात्र हो । तर, खासमा एउटा भिक्षुको बाल्यकालदेखि जीवनलीला समाप्तिसम्मको कथा हो ! ऋतुहरुमा वर्गीकरण गरेर भिक्षुको वाल्यकालदेखि जीवनलीला समाप्तिसम्मको कथा बोलिएको छ । एउटा भिक्षुको जीवनमा आक्कल–झुक्कल आउने पात्रहरुले पार्ने प्रभावबाट नै आध्यात्मिक र शुखमय भनिएको आधुनिक जिवनबीचको फरक ब्याख्या गरिएको छ ।
३ बैशाख २०७७, बुधबार हरप्रहर न्युज डट कममा प्रकाशित
फिल्म हेर्ने हो भने युट्युवमा उपलब्छ ।
चीन भ्रमणको क्रममा सिचुवान विश्व विद्यालय पुग्दा